Fomba fianarana amin'ny fanadinana safidy maromaro
Ho an'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny Strategies & Studying
8 Dingana Hanamafisana Ireo Fitsapana ireo
Fanadinana safidy marobe. Mahafantatra ny atao rehetra ny tsirairay, sa tsy izany? Mamaky fanontaniana fotsiny ianao, ary mifidiana ny taratasy misy ny valiny marina avy amin'ny vondrona misy safidy misy. Tsotra tsotra izao, sa tsy izany? Tsy misy fomba maro azo anaovana an'io karazana fitsapana io? Eny, tsy marina izany. Ny fianarana ho amin'ny fanadinana safidy marobe dia fahaiza-manao izay azonao ianarana, samirery, ary tonga lafatra, toy ny hoe mandray sy mandalo fanadinana maro samihafa.
Tsy ny tontolon'ny fitiliana rehetra dia mitovy!
Alohan'ny hamoahana ny andro fitsapana tsy voaomana, vakio ny dingana mba hianarana amin'ny fanadinana safidy maromaro etsy ambany ary hampiakatra ny fepetra azonao hahazoana ny isa tianao.
Dingana # 1: Manomboka ny fianarana ny andro voalohany amin'ny sekoly
Mampihomehy izany, saingy marina izany. Ny fanomanana fanadinana dia manomboka amin'ny andro voalohany. Tsy misy zavatra mandany fotoana sy famerimberenana rehefa mianatra. Ny fomba tsara indrindra hianarana zavatra iray dia ny fandraisana anjara ao am-pianarana, fanamarihana tsara mandritra ny lahatenin'ny lesona, ny fianarana ho an'ny quizzes, ary ny ianaranao rehefa mandeha ianao. Avy eo, rehefa andro fitsapana maro samihafa, dia averinao jerena fotsiny ny fampahalalana fa tsy hianatra fotsiny izany rehetra izany.
Dingana # 2: Mangataha ny votoatin'ny fitsapana samihafa
Alohan'ny hanombohanao amin'ny fianarana amin'ny fomba ofisialy ny fanadinana anao dia manana fanontaniana vitsivitsy hanontaniana ianao. Mila manontany ny mpampianatra na mpampianatra anao ianao hoe inona no hataony amin'ny fanadinana samihafa. Mandeha fanontaniana toy ireto:
Manome torolàlana fianarana ve ianao? Izany no tokony ho fanontaniana voalohany avy amin'ny vavanao. Hanavotra ny tenanao ianao amin'ny fotoana voafetra amin'ny alàlan'ny bokinao sy ny quizzes tranainy raha manome anao ny iray amin'ireo ireo mpampianatra na mpampianatra anao.
Hanontaniana ve ity voambolana ity? Raha eny, ahoana? Raha mitadidy ny voambolana rehetra amin'ny famaritana azy ireo ianao, saingy tsy azonao ampiasaina araka ny tokony ho izy ny teninao, dia mety ho very ny fotoanao. Mpampianatra maro no hangataka famaritana soratra amin'ny teny voambolana iray, saingy misy ny mpampianatra tsy mahatsapa raha mahafantatra ny teny famaritana ho an'ny teny ianao, raha mbola azonao ampiasaina izany na mampihatra izany.
Moa ve isika mila mampihatra ny fampahalalana nianarantsika na tsianjery fotsiny? Fanontaniana lehibe izany. Fomba tsotra mifototra amin'ny fanadinana, ny iray izay tokony hahafantarana anarana, daty, ary fampahalalana hafa amin'ny antsipiriany, dia mora mora ny mianatra. Mahatsiaro fotsiny ary mandehana. Na izany aza, raha toa ianao mila mila mampifanitsy, mampihatra, na manombana ny vaovao nianaranao, dia mitaky fahatakarana lalindalina kokoa sy fotoana bebe kokoa.
Dingana # 3: Mamoròna fandaharam-pianarana
Azoko. Tena sahirana ianao. Izany no mahatonga anao ho zava-dehibe kokoa aminao hamorona fandaharam-pianarana mandritra ny andro maromaro alohan'ny fitsapana. Azonao atao ny mamantatra ny toerana misy anao ora vitsivitsy ao anatin'ny herinandro ho avy mialoha ny fitsapana anao, fa tsy minitra minitra talohan'ny,. Mianatra amin'ny fanadinana safidy maromaro, manomboha herinandro mialoha raha azo atao, mandalina kely kely kokoa mandra-pahatongan'ny andro fitsapana.
Dingana # 4: Mandamina ny zava-drehetra avy amin'ny tarika na ny toko
Ny mpampianatra anao angamba dia efa nanome anao ny ankabeazan'ny fitsapana ao amin'ny taratasinao, ny quizzes ary ny fanendrena teo aloha. Noho izany, miverena amin'ny fitaovana. Avereno ny fanamarihanao na asio azy ireo mba hahafahana mamaky azy. Tadiavo ireo valiny momba ireo fanontaniana tsy mety ataon'ireo quiz na olana tsy azonao amin'ny andraikitrao. Amboary ny zava-drehetra mba ho vonona ny hianatra.
Dingana # 5: Mametraha fe-potoana
Aza mandany adiny telo hianarana ho an'ny fitsapana amina laharana. Ratsy, ratsy, ratsy. Ny sainao dia hivezivezy, ary hanomboka ny andro manjavona ianao, ny teôkôlà, na ny fanalana azy amin'ny hafa. Apetraho mandritra ny 45 minitra ny fandaharam-potoana, hianarana, ary alaivo isa-minitra dimy minitra rehefa miala. Avereno. Apetraho indray mandritra ny 45 minitra ny fandaharam-potoana, mandiniha ary manaova fialan-tsasatra. Tohizo ity manaraka ity, mandra-pahatoky anao amin'ny fahalalanao.
Dingana # 6: Master The Material
Tsarovy fa ianao dia hanana safidy amin'ity fanadinana safidy marobe (noho izany, ny anarana), raha toa ka azonao atao ny manavaka ny tsara sy ny "karazana" valiny marina, dia volamena ianao. Tsy voatery hamerina fampahalalana ianao - hahafantarana fotsiny ny vaovao marina.
Ho an'ny zava-misy: Ampiasao ny fitaovana ampiasain'ny mnemonic toy ny mihira hira na manao sary mba hanampy anao hitadidy ny zava-misy marina sy amin'ny antsipiriany. Ampiasao ny karatra (na ny taratasy na ny rindrambaiko) ho an'ny voambolana.
Ho an'ny hevitra: Hazavao ny hevitrao amin'ny feo mafy toy ny hoe mampianatra izany amin'ny olona tsy mahalala ny zavatra lazainao. Tsara kokoa? Hazavao amin'ny mpiara-mianatra izay tsy tena izy. Manorata andinin-teny momba ny fiteny izay azonao takarina. Manorata Diagrama Vèn mampitaha sy manohitra ny hevitra miaraka amin'ny hevitra iray izay tena mahazatra anao.
Ho an'ny zava-drehetra: Raha toa ianao ka sahiran-tsaina amin'ny fomba fandalinana tsy tapaka anao, dia ampiasao ny iray amin'ireto fomba fitsaboana kanto 20 ireto mba hijanona ho mpilalao.
Dingana # 7: Mitadiava Olona Anao
Mba hizaha ny fahalalanao dia misafidiana mpiara-mianatra iray mba hangataka fanontaniana aminao avy amin'ny fanamarihana, quizzes taloha ary andraikitra, izay manome anao safidy vitsivitsy ho anao raha tianao ny mifidy. Ny mpampianatra tsara indrindra dia mangataka anao ihany koa hanazava ny valinteninao mba hahitana raha tena fantatrao ny zavatra lazainao fa tsy mamerina fotsiny ny votoatin'ny fanadinana.
Dingana # 8: Famerenana maromaro fitsapam-pahaizana maromaro
Ity dia dingana lehibe. Aoka ho azo antoka ny handroso ireo paikady fitsapana maro samihafa , noho izany dia fantatrao ny karazana valim-panontana azonao atao amin'ny andro fitsapana.
Fomba 14 hanoratana bebe kokoa any am-pianarana
Famakiana ny asa famakiana famakiana 1 Valiny
Tetikady fitsapam-pahaizana maromaro
Top 15 ACT Torohevitra mba hizarantsika ny fitsapana
Oviana no navoaka ny PSAT Scores?
Fanaovan-tsakafo sy fanazaran-tena
Toe-karazany amin'ny Vocab Practice 1
Tolo-kevitra 5 tsara indrindra ho an'ny mpianatra mpianatra
Fanontaniana momba ny fanabeazana
Nahoana ianao no tsy mitandrina ny fanadinanao?
Ilay Tany Nampanantenaina ao amin'ny Baiboly
Acoustic Rock Resurgence - Late-'80s Folk Singer-Songwriter Revival Profile
Ahoana ny fomba hanohanana ny lohan'ny soavaly
Herbicides ampiasaina hamonoana katsaka sy hazo
Ahoana no handehanana mamakivaky ny tavoahangy
Abigail Williams avy amin'ny fitsapana saro-kenatra
Mianara momba ny demokrasia mivantana sy ny Pros and Cons
Kolontsaina ao amin'ny Repoblika Romana fahiny
Sokajin-teny momba ny zaridaina
Kodiarana fanatanjahantena ho an'ny modely lavareny Ford Mustang
Cheyanne Jessie - Fandroahana kila-drà
Ny Fisedrana Nuremberg
Diana Diana Pictures Princess
Ny fiatrehana ny fambolena: Ny adihevitra amin'ny abiotika sy biotic
Callaway Apex Pro 16 Irons, Apex CF16 Irons sy Apex Hybrids
Princess Olga avy any Kiev
Azonao ambara amiko ve ny anarana taloha?
Ahoana ny fanaovana sandia na kilaometatra madio
Ny tantaran'ny telegrafy elektrôlôjika sy telegrafy
Fanadinadinana momba ny fianarana amin'ny fianarana amin'ny fianarana - Mpampianatra mpianatra
Ny fiteny rehetra |
10 amin'ireo fotoana tsy hay hadinoina ao amin'ny Tantara mpilalao baolina kitra
Fitsipika momba ny fialan-tsasatra amin'ny sambo fiaranao
Ireo teny mampanentana momba ny reny, ny anjely ary ny fahagagana
Ny Fifohazana Lehibe Faharoa